Dhageysiga khudbadaha musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya oo maanta bilaabmatay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDhageysiga khudbadaha musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya oo maanta bilaabmatay
February 2, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Dhageysiga khudbadaha musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya oo maanta bilaabmatay. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dhageysiga Khudbadaha musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah si rasmiya uga bilaabmatay xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee Muqdisho.
Dhageysiga khudbadaha ayaa socon doonta muddo saddex beri ah maanta oo ah maalinta kowaad waxaa khudbadahooda baarlamaanka ka hor jeedin doona sideed musharax, maalinta labaad oo Sabtida soo socoto ahna waxaa jeedin doona sideed musharax oo kale halka maalinta ugu dambaysa oo ah Axad ay iyana jeedin doonaan sideed kale.
24 musharax oo ay kamidyihiin madaxweynaha hadda xafiiska jooga Xasan Shiikh Maxamuud iyo raysulwasaaraha xaadirkan Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa u tartamaya doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanada aqalka hoose oo ka kooban 75 xubnood iyo kuwa aqalka sare oo ka kooban 54 xubnood ayaa dooran doona madaxweynaha xiga ee dalka.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa la qorsheeyay in ay dhacdo 8-da bishaan Febaraayo.